Defragmenting nataon'i Bohm ao amin'ny "Mona Lisa Defragged" | Famoronana an-tserasera
Ny kanto pixel o Malaza izao ny zavakanto pixelated noho ny lalao video sasany izay manamarika vanim-potoana iray manontolo toy ny Minecraft na ireo lalao finday tsy manam-petra izay mitondra nostalgia ho azy ireo ho antsika izay nandalo ny taona 80 sy 90 ho an'ireo milina lalao video taloha.
Noho io antony io isika dia afaka mahita mpanakanto sasany izay hita ao amin'ny kanto pixelated endrika iray ento aminay ireo sanganasa tany am-boalohany sy samihafa izay ampiasantsika bebe kokoa. Tyler Bohm dia iray amin'izy ireo ary nanonona anay teo alohan'i «Mona Lisa defragged», asa vita amin'ny akrilika sy hazo izay manana originality lehibe ary mety ho io no teboka manokana tsy hita avy amin'ny habaka tianao ho lasa fihaonana. ho an'ny namana.
Ny hevi-dehibe dia ny fizarana ho faritra maro amin'ny na asan'ny kaliberaly toy izany aza toa an'i Mona Lisa. Raha ny zava-mitranga amin'ity asa kanto nataon'i Bohm ity izay nanimbany ny fomba fijerintsika momba ity sangan'asan'ny hosodoko klasika ity.
Na dia mety ho toy ny zavakanto pixelated aza izany ny hafatra dia mety ho lalina kokoa ny zavatra azon'ny olona raisina voalohany, indrindra raha apetratsika ny tsirairay amin'ireo singa ireo izay mandrafitra ny asa manontolo ary mety ho ireo atôma mandrafitra ny vatantsika koa izany.
Bohm dia mitondra antsika amin'ny asany bebe kokoa amin'izany fomba manokana ary, ao anatin'ny fotoana fohy, dia lalao video avy amin'ny tranokalanao manokana. Raha mitady zavatra mitovy amin'izany izay efa nandalo an'ireto andalana ireto isika dia mandeha amina endrika hafa ho an'ny vola taratasy norveziana izay nampiasana an'io fiasa manokana io tao amin'ny pixel mba hamoronana andian-dahatsoratra tena mamorona sy am-boalohany.
Hevitra manokana ho an'ny fotoana tsy ampoizintsika nahafinaritra ny andro mijery efijery feno piksel.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » "Mona Lisa defragged" avy amin'i Tyler Bohm amin'ny akrilika amin'ny hazo sy ny plexiglass